Ukulungiselela izitshalo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukulungiselela izitshalo
Indlela yokusebenzisa "i-Topaz": incazelo kanye nezakhiwo zalesi sidakamizwa
Izifo ze-fungal ziyingozi kuzo zonke izitshalo, kusukela ezitshalweni zemifino kuya ezitshalweni zasendlini. Ezimweni ezinjalo, umsizi osebenza kahle kakhulu kumgadi wensimu kanye nomlimi wezitshalo uzoba yi-Topaz fungicide, imiyalelo yokusetshenziswa okuzoyithola kulesi sihloko ngezansi. "I-Topaz": incazelo yesidakamizwa Isidakamizwa esithi "I-Topaz" iphakathi kwamafungicides - izinto ezikwazi ukubhubhisa futhi zingavumeli ukuthuthukiswa okuqhubekayo kwezinhlamvu kanye ne-mycelium ye-fungus ye-pathogenic.
Bactericide yemvelo "Gamar", indlela yokuhlunga nokufaka amaphilisi (ibhukwana)
Ngokwesigaba sama-pesticides, ama-bactericides anikezwe ekilasini elihlukile lezidakamizwa, kodwa naphezu kwalokhu zibalwa phakathi kwama-fungicidal agents ahlanganisa isenzo sokulwa nesandulela-ngculazi nesifo se-antifungal. Ama-bactericides asetshenziselwa ukubulala ukutheleleka kwebhaktheriya kanye ne-fungal enhlabathini nasezitshalweni.
"Kornevin": incazelo kanye nemiyalelo yokusetshenziswa kwezidakamizwa
Esikhathini sokuthuthukiswa kobuchwepheshe, i-agrotechnology yezimbali ezikhulayo, izitshalo zemifino nezithelo azimeli. Ukuze sikwazi ukusabalalisa izitshalo ezingavamile zezitshalo, sivame ukusebenzisa indlela yokusika, kodwa, njengoba kuyaziwa, akuzona zonke izinsika ezithatha izimpande. Khona-ke sibhekene nomsebenzi wokuvuselela ukukhula kwezimpande ukuze uthole izinga lokusinda kwezingu-100%.
Indlela yokusebenzisa lesi sidakamizwa "Ikhaya" ezifweni zamatamatisi, ukhukhamba namazambane
Imithi ekhethekile - i-fungicides - ihle kakhulu ekulwa nezifo ze-fungal. Enye yezinto eziphumelela kakhulu phakathi kwabo yisidakamizwa esithi "Hom". It isetshenziswa engadini, engadini, imibhede imbali. Kodwa ukuze izidakamizwa zingalimazi izitshalo, kubalulekile ukwazi ukuhlanza "Hom" ngokupuniza nokuthi ungayisebenzisa kanjani ngendlela efanele.
Ukukhula kwezitshalo okukhuthaza "Etamon": imiyalelo yokusetshenziswa
Eminyakeni yamuva, izimbangela zokugqugquzela nokukhula kwezitshalo ziye zathandwa kakhulu izakhamuzi zasehlobo, abalimi, futhi zithanda izitshalo zezindlu. Okulandelayo, sicabangela ngokuningiliziwe enye yazo, okungukuthi "i-Etamon". Ake siqonde ukuthi lo muthi ungubani nokuthi ngabe uyayisebenzisa. Uyazi? Izitshalo zokukhula kwezitshalo zemvelo zibizwa ngokuthi ama-phytohormones futhi zikhiqizwa izitshalo ngamanani amancane.
Abalawuli bezitshalo zokukhula: imiyalelo yokusetshenziswa kwe-stimulator ye "Bud" yezimbali
Ukuvuselela okukhulayo, okusetshenziselwa ngokwemiyalo, kunika imiphumela emihle kuphela. Abalimi be-amateur baqala ukusebenzisa ukuvuselela kungekudala, kodwa ngenkuthalo. Yiziphi izinto eziqukethe lezi zidakamizwa, ukuthi zithinta kanjani isitshalo nokuthi zisebenza kanjani? Cabanga ngesibonelo sokugqugquzela ukukhula "Bud".
I-Heteroauxin: incazelo, into esebenzayo, imiyalelo yokusetshenziswa
Yonke insimu, kungakhathaliseki ukuthi uyakhula - izihlahla zezithelo, izihlahla noma izimbali, njalo ufuna ukubona umphumela womsebenzi wakhe ukhula isitshalo esinempilo. Abaningi bayakwazi kakade imfihlo: yini oyidingayo ukuze izitshalo zihlume kahle futhi zikhuthele ekukhuleni - lokhu kuyi-stimulator yezimpande, kanye nomanyolo we-organic concentrated, heteroauxin.
Indlela yokusebenzisa lesi sidakamizwa "Fundazol"
Ama-fungicide amalungiselelo okuvikela nokuvimbela izitshalo ngokumelene nezifo ze-fungal and bacterial. Ukuphazamiseka emasikweni ahlukahlukene, isikhunta singabhubhisa ngokuphelele indawo yokutshala, isakaze esitshalweni ukutshala. Namuhla, imakethe inokukhethwa okukhulu kwemithi ehlukene futhi kunzima ukuyihamba.
Incazelo egcwele yesidakamizwa "Immunocytofit" nemiyalelo yokusetshenziswa
Ukulungiswa kwemvelo Immunocytofit ngumanyolo wemvelo wezitshalo. Ukwandisa ukuphikisana kwazo nezifo ezihlukahlukene, ukusheshisa inqubo yokukhula, kwandisa izitshalo kanye nokwehlisa imiphumela yezinhlobo ezincane ze-phytopathogenic. Ukwaziswa okujwayelekile "Immunocytofit" ngumkhiqizo wokuzivikela oye wathola ukusebenza kwawo ekucubungeni izitshalo nezithelo zokuhlobisa, njengekakhukhamba, utamatisi namazambane, kanye nazo zonke izinhlobo zembewu.
Imithi "Ecosil": imiyalelo yokusetshenziswa yokucubungula
Ngokuba izitshalo ziphethwe yizifo noma izimo zezulu kanye namasu okulima angalungile, i-Ecosil iyi-potion ebonisa ukunika amandla namandla. Indlela yokulondoloza izimila "Ecosil" engadini, ensimini nasensimu yembali, yiziphi abalimi nabalimi abakushoyo ekubuyekezeni, nokuthi kungani lesi sidakamizwa - lokhu kuzoxoxwa ngakho.
Isidakamizwa esithi "Tiovit Jet": imiyalelo yokusetshenziswa
Izitshalo ze-Flower, izithelo nezitshalo azidingi ukunakekelwa kuphela, kodwa futhi nokuvikelwa kuzo zonke izinhlobo zezifo kanye nemikhaza. Umsizi wensiza osebenza kahle kuleli bhizinisi uzoba "yi-Tiovit Jet" - uxhumane ne-fungicide yemiphumela eminingi. Okulandelayo, sicabangela ngokuningiliziwe izici zaleli thuluzi. "Tiovit Jet": into esebenzayo kanye nendlela yokukhululwa "Tiovit Jet" isungulwe ngokwayo njengemvikeli wekhwalithi yezitshalo ezitshalwe ezifweni nasezinambuzane.
I-fungicide ehlangene "I-Acrobat TOP": imiyalelo yokusetshenziswa
Ngeshwa, abalimi nabalimi bavame ukubhekana nazo zonke izinhlobo zezifo zezitshalo ezinciphisa ukukhiqiza kwabo, noma ngisho nokuholela ekufeni kwezitshalo. Abakhiqizi be-fungicides ngonyaka banikeza izinyathelo zabo ezintsha, eklanyelwe ukunqoba lesi sifo ngesikhathi esifushane kakhulu. Enye yalezi zidakamizwa iyi-fungicide yendawo ephakathi kwe-two "Acrobat TOP", eyenziwe yi-BASF.
I-fungicide "i-Horus": imiyalo yokusetshenziswa
Ukuqinisekisa ukuvunwa okuhle engadini noma isiteji sesithelo sezithelo, ukunakekelwa okufanele kufanele kuthathwe izitshalo ezingase zibe nezifo ezihlukahlukene kanye nezinambuzane. Ukulwa nezifo kwakhiwe amathuluzi amaningi nezidakamizwa. Emakethe yethu ungathola isidakamizwa esisha "iHorus", esivele sikwazi ukuwuthola inhlonipho yabalimi nabalimi.
Kungenzeka yini ukusebenzisa i- "DNOC" ye-fungicide kubalimi nabalimi?
Abanikazi beziqephu zezwe banezinkinga eziningi. Izinambuzane nezifo zazo zonke izinhlobo ziyabacasula ngokukhethekile - kubonakala ukuthi unyaka nonyaka bahlala bephikisana kakhulu nesenzo sezixazululo zokwelapha zendabuko. Ngakho-ke kufanele usebenzise ama-formulations anamandla (ngokuqinisekile). Cabangela enye yalezi zixhobo, ufunde kabanzi mayelana nomuthi obizwa ngokuthi "i-DNOC" nokuthi yini okusetshenziswa ngayo.